Hlola iParis, eFrance - World Tourism Portal
Hlola iParis, eFrance
Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eParis, eFrance
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseParis
Bukela ividiyo ekhuluma ngeParis
Hlola iParis “Idolobha Lokukhanya” nenhloko yezothando ebilokhu iyizinhloli zabahambi amakhulu eminyaka nokubonwayo kwangempela. Kuyiqiniso, akukho ukuvakasha obekungaphothulwa ngaphandle kokubheka izindawo ezaziwa ngazo emhlabeni. Kunzima ukuphuthelwa i-Eiffel Tower, ikakhulukazi lapho ibekwe kahle ebusuku, kepha i-Arc de Triomphe, iNotre Dame ne-Sacré Coeur zombili izinto ezinhle kakhulu futhi ezinhle kakhulu. Njengoba singekho ngaphansi kwe-3,800 lesikhumbuzo sezwe ku-Paris nasezindaweni ezizungezile, umlando uzungeze yonke indawo. Hambela emapaki aluhlaza wedolobha amakhulu, kanye ne-Gardens yaseLuxembourg njengenye yezintandokazi, futhi uqinisekise ukuchitha isikhathi esithile emabhange adumile omfula iSeine. Futhi, ungaphuthelwa iSigodlo esihle saseVersailles, isikhumbuzo esihle kakhulu seRegime Yasendulo esiseduzane ne20km kude nenhloko-dolobha.
I-Paris, inhlokodolobha yaseFrance enendawo yonke, inedolobha elikhulu kunayo yonke yaseYurophu, enabantu abayizigidi ezingama-2.2 abahlala endaweni eminyene, enkabeni yedolobha futhi icishe ibe yingxenye yabantu abayizigidi ze-12 abahlala kuyo yonke indawo yedolobha. Itholakala enyakatho ye France emfuleni iSeine, iParis inedumela elihle lokuziphatha elihle kakhulu futhi lothando lwawo wonke amadolobha, eliqhakambisa nobudlelwano obungokomlando futhi linomthelela omkhulu ezindaweni zamasiko, ezobuciko, imfashini, ukudla nokuklama. I-Dubbed the City of Light (i-Ville Lumière) ne-Capital of Fashion, iyikhaya labakhombisa imfashini nezimonyo ezinhle kakhulu emhlabeni. Ingxenye enkulu yedolobha, kufaka phakathi i-River Seine, isiza samagugu omhlaba se-UNESCO. Idolobha linenombolo yesibili ephezulu kakhulu yokudlela yaseMichelin emhlabeni (ngemuva Tokyo) futhi iqukethe izimpawu eziningi zezimpawu ezinhle, njengezindawo zokuvakasha ezivakashelwa kakhulu emhlabeni i-Eiffel Tower, i-Arc de Triomphe, iNotre-Dame Cathedral, iMnyuziyamu yaseLouvre, iMoulin Rouge, neLido, okwenza kube indawo ethandwa kakhulu izivakashi emhlabeni nabavakashi abayizigidi ezingama-45 ngonyaka.
IParis ihanjiswa yizikhumulo zezindiza ezintathu zamazwe omhlaba - ukuthola eminye imininingwane, kubandakanya izikhathi zokufika / zokuhamba, hlola amasayithi asemthethweni.
Indlela engcono kakhulu futhi eshibhile yokuthola ukuzungeza iParis ihamba ngezinyawo, futhi okwesibili, isebenzisa iMétro.
Ukuhamba eParis kungenye yeenjabulo ezinhle zokuvakashela iDolobha Lokukhanya. Kungenzeka ukuwela lonke idolobha ngamahora ambalwa kuphela (kuphela uma ungavimba ngandlela thile ukuvimba ezindaweni zokudlela ezinkulu ezitolo kanye nezitolo eziningi).
Ukuze uthole ukuma okuhle kwedolobha ngezinyawo ngenkathi ubona iningi lokubona okukhulu kweParis, ungahamba ngeNtshonalanga uye eMpumalanga uhamba usuka e-Arc de Triomphe uye e-Ile de la Cite (Notre Dame). Lokhu kuhamba kuthatha cishe amahora we-1-2 ngaphandle kokuma. Qala ngenhla kweChamp Elysees (e-Arc de Triomphe) bese uqala ukuhamba phansi eChamp Elysees ubheke endaweni ('isikwele') de la Concorde.
Endleleni ebheke ku-obelisk esigcawini, uzobona izitolo ezinkulu kanye nezindawo zokudlela ezaziwa kakhulu ngeParis.
Lapho usudlulise indawo enkulu yezitolo, uzobona iPetit Palais neGrand Palais ngakwesokunene sakho.
Endaweni de la Concorde, uzokwazi ukubona izikhumbuzo eziningi ezinkulu zeParis ezikuzungezile. Phambi kwakho kukhona amaTuileries, ngemuva kwakho kukhona amaChamp-Elysees no-Arc de Triomphe, ngemuva kwakho ngakwesokunxele sakho yi-Tour Eiffel neMusee d'Orsay, futhi ekugcineni, ngakwesobunxele sakho yiMadeleine.
Qhubeka ngqo phambili bese ufaka amaTuileries Gardens adlula ngasemithonjeni, izimbali, kanye nabathandi epaki.
Njengoba uqhubeka uqonde phambili, nangaphandle kwengadi, uzobona umnyango wepiramidi oya eLouvre ngqo phambi kwakho.
Ngophiramidi ngqo phambi kwakho, nama-Tuileries ngqo ngemuva kwakho, jikela ngakwesokunene sakho bese uya ngaseSeine.
Manje usungahamba ngeSeine (empumalanga) uze ufike ePont Neuf. Nqamula i-Pont Neuf bese udabula i-Latin Quarter, uwele umfula futhi ukuze ufike kwi-Notre Dame Cathedral e-Ile de la Cité.
Okunye ukuhamba okujabulisayo edolobheni kukuvumela ukuthi ubone izinto ezinhle kakhulu zeMontmartre emahoreni ambalwa. Lokhu kufaka phakathi i-Sacré-Coeur, Indawo du Tertre, iBateau Lavoir, iMoulin de la Galette nakho konke ukubona okwenze izwe laseMontmartre lidume. Abahambi abahlakaniphe kakhulu basebenzisa ukuhamba kwalo muzi futhi bahlale ngaphezu komhlabathi ngangokunokwenzeka. Ukugibela metro okungaphansi kokuma kwe-2 kuvinjelwa kangcono ngoba ukuhamba kuzothatha isikhathi esilinganayo futhi uzokwazi ukubona amanye amadolobha. Lokho bekushilo, naka iziteshi zeMétro ongadlula kuzo ohambweni lwakho; inethiwekhi ye-Métro iminyene kakhulu phakathi kwedolobha futhi imigqa ihlala itholakala ngqo ngaphansi kwama-boulevards amakhulu, ngakho-ke uma ulahleka kulula ukuphinda uthole izithwalo zakho ngokuhamba nge-Boulevard enkulu uze uthole isiteshi se-Métro.
Kuyajabulisa njalo ukuzwa idolobha ngezinyawo, futhi kunohambo oluningi lokuhambahamba oluzungeza iParis, noma ngabe uyaziqondisa (ngosizo lwencwadi yeziqondisi noma yomhlahlandlela on-line) noma umhlahlandlela wokuvakasha (ukubhukwa nge-ejensi yakho yokuvakasha noma ihhotela) . Idolobha lihlolwa kangcono ngonyawo, futhi ezinye zezinkumbulo ezinhle kakhulu ozoba nazo ngeParis ukuhamba ngezindawo ezitholwe ngasese.
Into emnandi ngeParis ukuthi (okungenani ngaphakathi kweBoulevard Peripherique) azikho izindawo ezingenakuthinteka (njengezindlu ezimbi noma izingxenye zezimboni) ongazidabula ngenkathi usuka esifundeni esithile esiya kwesinye.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu nezindlela ezilula kakhulu zokubona ubuhle beParis ngeParis Museum Pass, ikhadi lokungena elikhokhelwe langaphambilini elivumela ukungena eminyuziyamu nasezikhumbuzweni ze-70 ezungeze iParis (neSigodlo seVersailles) futhi lingena nge2 -Izinsuku, ama-4-day namahlelo we-6-day. Qaphela lezi yizinsuku 'ezilandelanayo'. Ikhadi likuvumela ukuthi ugxume emigqeni emide, indawo enkulu yokuvakasha ngesikhathi sokuvakasha lapho umugqa ungaba mkhulu, futhi utholakala eminyuziyamu yokubamba iqhaza, amahhovisi abavakashi, nakuzo zonke iziteshi ezinkulu zezitimela zeMétro neRER. Usazodinga ukukhokha ukuze ufake imiboniso ekhethekile. Ukuze ugweme ukulinda kulayini wokuqala olude ukuthenga iMnyuziyamu yokuGcina, yeka ukuthenga pass yakho ngosuku noma ngaphezulu kusasele ngemuva kosuku. Iphakethe alisebenzi kuze kube yimnyuziyamu yakho yokuqala noma ukuvakasha kwesayithi lapho ubhala usuku lwakho lokuqala. Ngemuva kwalokho, izinsuku ezimboziwe zilandelana. Ungabhali usuku lwakho lokuqala kuze kube uqinisekile ukuthi uzosebenzisa ukudlula ngalolo suku futhi uqaphele ukusebenzisa isitayela sosuku lwaseYurophu esivamile njengoba kukhonjisiwe ekhadini: usuku / inyanga / unyaka.
Hlela ukuvakasha kwakho: Amasayithi amaningana anendawo “yokutshekela” ekhawulela inani lezivakashi ezingangena ngalo. Lokhu kufaka phakathi: i-Eiffel tower, iSainte-Chapelle, iCatacombs nezinyathelo zokukhuphukela phezulu kweNotre Dame Cathedral. Ukugwema ulayini, kufanele uqale usuku lwakho ngokufika kwenye yalezi zingosi okungenani imizuzu ye-30 ngaphambi kokuvula. Ngaphandle kwalokho, lindela ukulinda okungenani ihora. Iminyuziyamu eminingi nemiphemelo ivaliwe ngoMsombuluko noma ngoLwesibili. Izibonelo: Imnyuziyamu yaseLouvre ivalwa ngolweLwesibili ngenkathi umnyuziyamu wase-Orsay uvaliwe ngoMsombuluko. Qiniseka ukuthi ubheka izinsuku zokuvala imnyuziyamu ukugwema ukudumazeka. Futhi, izindawo eziningi zokubala zamathikithi zivala i-30-45min ngaphambi kokuvalwa kokugcina.
Yonke iminyuziyamu kazwelonke ivuliwe mahhala ngeSonto lokuqala enyangeni. Kodwa-ke, lokhu kungasho imigqa emide nemibukiso eminyene. Gcina kude neParis phakathi nesonto le-Easter ngenxa yokuqunjelwa. Abantu kufanele bagqame emgqeni we-Eiffel amahora amaningi ngisho nasekuseni kakhulu. Kodwa-ke, lokhu kulinda kungancishiswa kakhulu, uma kufaneleka, ngokuhamba emazingeni amabili okuqala, bese uthenga ithikithi le-lifti liye phezulu. Ukungena embukisweni engapheli eminyuziyamu eqhutshwa yedolobha kumahhala ngaso sonke isikhathi (ukungena kuyakhokhiswa imibukiso yesikhashana).
Lokhu kufakwa kuhlu kumane nje kuyizinto ezinhle kakhulu zezinto okufanele uzibone ngempela uma ungavakashela eParis. Uhlu oluphelele luyatholakala ekhasini ngalinye lesifunda.
Ukufakwa ohlwini okuhle kwemicimbi yamanje yamasiko eParis kungatholwa 'ePariscope' noma 'ezibukweni ze-Officiel des', omagazini beviki bonke abalahla wonke amakhonsathi, imibukiso yobuciko, amafilimu, imidlalo yesiteji kanye neminyuziyamu. Kuyatholakala kuwo wonke ama-kiosks.
I-Arc de Triomphe ilanda ubukhazikhazi futhi inikeza umbono ophakathi nedolobha
ICatacombsusehaka ukugcina amathambo aqabile wabantu ababalelwa ezigidini ze-6 eziphuma emathuneni aseParis. Zigcwalisa ingxenye yemigwaqo nemhubhe eyizinsalela zezimayini zamatshe ezindala ngaphansi kwedolobha. Kukhona umkhawulo wenani lezivakashi ezivunyelwe ngaphakathi kwamaCatacombs ngasikhathi sinye (abantu be-200). Ngakho-ke, uma ufika nje ngemuva kokuvula, kufanele ulinde kuze kube yilapho kuphuma othile, cishe imizuzu ye-45-60, ngaphambi kokuba noma ngubani amukelwe.
I-Château de Versailles kumele ibonwe. I-chateau enkulu kakhulu yaseFrance, emaphethelweni edolobha, ivakashelwa kalula ngesitimela. Kwake kwaba yikhaya likaLouis XVI noMarie Antoinette.
Umbhoshongo we-Eiffel. Asikho esinye isikhumbuzo esifanekisela kangcono iParis.
Grand Arche de la Défense. Ukuhluka kwamahhovisi anamuhla kwe-Arc de Triomphe.
I-Notre Dame Cathedral. Ikhathalogu elihlaba umxhwele i-Gothic okwakungugqozi lwenoveli kaVictor Hugo ethi The Hunchback of Notre Dame. Yehlela phezulu!
Opera Garnier. Umsebenzi wobuciko bemidlalo yaseshashalazini yekhulu le-19th elakhiwa nguCharles Garnier futhi wamiswa ezindlini ze-1875 iParis Opera selokhu yasungulwa uLouis XIV.
Ngaphansi, indawo yokugcina yokuphumula yamaqhawe amakhulu aseFrance Republic kubandakanya uVoltaire, uVictor Hugo, noMarie Curie; ngaphezulu, umbono omangalisayo wedolobha.
Amathuna asePère-Lachaise. Ngokungafani nanoma yiliphi indawo yamathuna emhlabeni. Amatshe amathuna ajwayelekile, izikhumbuzo eziyisikhumbuzo ezibekwe phakathi kwemigwaqo efakwe emthini. Bheka amathuna kaJim Morrison, Oscar Wilde, noFrederic Chopin, phakathi kwabaningi.
Sacré Coeur. Isonto elimiswe phezulu endaweni ephakeme kakhulu eParis. Ngemuva kwesonto kukhona indawo yabaculi, ngaphambili kunemibono emangalisayo yomuzi wonke.
Sainte Chapelle. I-chapel engilaziweyo enengilazi. Ingaphakathi elihle kakhulu kune-Catral Notre Dame Cathedral.
Indawo de la République. Njengoba ilungiswa kabusha kwi-2014 iba yindawo evulekile ehamba ngezinyawo. Umqondo wokuhamba noma ukubukwa ngabantu. Yindawo yemibukiso. Yilapho izixuku zihlangane khona ngemuva kokudutshulwa kukaCharlie Hebdo.
Yonke iminyuziyamu kazwelonke kanye nezigodlo kuzo kukhululekile kuwo wonke amaSonto okuqala enyanga. Iminyuziyamu eminingi yomphakathi, kanye nezigodlo eziningi zomphakathi (njenge-Arc de Triomphe noma imibhoshongo yeNotre-Dame), zikhululekile futhi kwizakhamizi zase-European Union noma kubahlali besikhathi eside (ngaphezulu kwezinyanga ezintathu), uma zingaphansi kwe26 ubudala.
ILouvre, Enye yamamnyuziyamu amahle kakhulu emhlabeni. Ikhaya le-Mona Lisa nabanye abangenakubalwa. Ukwakha okukhulu nokuqoqa, hlela okungenani ukuvakasha kabili.
I-Musée d'Orsay, iqoqo elimangalisayo eligcinwe esiteshini sesitimela sangaphambili. Isebenza ngabadwebi abakhulu bekhulu le-19th (i-1848-1914) kufaka phakathi iMonet “Blue Water Lilies,” kaRenoir's “Bal du moulin de la Galette”, van Gogh's “Bedroom in Arles”, Whistler's “The Artists Umama”, njll.
IRodin Museum, iqoqo Lakhe lomuntu siqu nezingobo zomlando, ekhaya elihle ngensimu.
I-Picasso Museum, Iqukethe iqoqo lomphathi uqobo
I-Musée Marmottan-Monet, imidwebo engaphezu kwe-300 yeClaude Monet. Futhi, imisebenzi kaBerthe Morisot, u-Edgar Degas, u-Mandouard Manet noPierre-Auguste Renoir. I- "Impression Soleil Levant" ngeMonet iyaboniswa.
Musée de l'Orangerie, Jardin des Tuileries] Izindlu "Iminduze Yamanzi" (noma "Nymphéas") - isibonakaliso se-360 degree of a Monet's ingadi yezimbali eGiverny. Futhi, imidwebo ye-impressionist kanye ne-post-Impressionist eyenziwe nguCézanne, Matisse, Modigliani, uPicasso, uRenoir, uRousseau, uSoutine, uSisley nabanye.
I-Musée Delacroix - Ihlala endlini yomdwebi we-Eugene Delacroix.
Center Georges Pompidou, Umnyuziyamu wezobuciko besimanje. Isakhiwo ne-Stravinsky Fountain ehlobene nazo ziziheha ngokwazo.
I-Les Invalides, Imyuziyamu emangalisa kakhulu yezingalo nezikhali kusuka ema-Ages aphakathi kuze kube namuhla. Futhi iqukethe ithuna likaNapoleon Bonaparte.
UCluny, umnyuziyamu wezikhathi zakudala obonisa amatende amahlanu athi “The Lady and the Unicorn”, ahlala engxenyeni ethile yamaRoma, eyingxenye yesakhiwo sangezikhathi zasendulo.
I-Le Musee des Art Decoratifs, Ikhombisa amakhulu ayisishiyagalombili eminyaka yeFrance savoir-faire
ICarnavalet, iMnyuziyamu yomlando waseParis; Imibukiso ihlala futhi imahhala.
ICité des Sciences et de l'Industrie - La Villette, imnyuziyamu yeSayensi ngokuyinhloko eyenzelwe izingane.
IMémorial de la Shoah, iMyuziyamu yeSikhumbuzo sokuQothulwa Kwabantu eParis, enhliziyweni yeMaiser rue Geoffroy l'Asnier. Ukungena kwamahhala, izinkambo eziholwa masonto onke. NgeSonto lesibili enyangeni kunohambo lwamahhala ngesiNgisi.
IJacquemart-Andre Museum, Iqoqo Langasese le-French, i-Italy, imisebenzi yobuciko baseDashi endlini evamile ye-19th century.
I-Musée du quai Branly, ubuciko bendabuko namasiko ase-Afrika, e-Asia, e-America nase-America Oceania.
Kubukeka sengathi kunokuhlala kwenzeka okuthile eParis, ngaphandle kwamaholide esikole ngoFebhuwari nango-Agasti, lapho cishe ingxenye yengxenye yamaParis ingatholakali eParis, kodwa e-Alps noma eSouth noma eNtshonalanga yeFrance ngokulandelana. . Isikhathi esimatasa kakhulu kungenzeka ukwindla, kusuka isonto noma ngalapho sekwedlule isikhathi sokuqasha noma ukubuyela esikoleni ”kuya ezungeza izinkundla zemidlalo yaseshashalazini yaseNoël (kumakhisimusi), kumabhayisikobho nezamakamelo
UMayison & Into
I-salon international de l'Agriculture
Usuku luka-Valentine nge-'I love you 'Wall
Isonto Lezimfashini Lasentwasahlobo.
I-French Tennis Open
URendez-vous au Jardin
I-Fête de la Musique
ILa Fête Nationale (Usuku lweBastille
I-Cinema en Plein Air
Ukuze uthole imininingwane yaseshashalazini, ama-movie nemibukiso athatha i-'Pariscope 'ne-'L'officiel du Spectacle' etholakala ezindaweni ezintsha ze- € 0.40. Amakhonsathi we- (ikakhulukazi amancane, ehlukile) akhetha i-LYLO, i-winc nayo iyincwajana encane, yamahhala etholakala kwamanye amabha naku-FNAC.
I-Paris ithathwa ngabaningi njengendawo yokuzalwa yezithombe, futhi ngenkathi umuntu engaphikisana nokunemba kwalesi simangalo, akukho mpikiswano yokuthi iParis namuhla iphupho lomthwebuli wezithombe. Inhlokodolobha yaseFrance inikezela ngamanani afanayo amathuna wokuthatha izithombe kubaqali nakwindlela efanayo. Inezikhumbuzo ze-photogenic (isib. I-Arc de Triomphe, i-Eiffel tower, i-obelisk e-Concorde, nabanye abaningi); ezokwakha (i-Louvre, Notre Dame neMnyuziyamu we-Arab World, ukubala nje ezimbalwa) nezigcawu zemigwaqo yasemadolobheni (isib. eMarais, Montmartre naseBelleville). Lapho ukhathele ukuthatha izithombe zakho, vakashela esinye sezikhungo eziningi ezinikezwe ukuthwebula izithombe (isib. I-European Museum of Photography, iJeu de Paume Museum noma iHenri Cartier Bresson Foundation). Kulezi nezinye izikhungo, ungafunda ngomlando ocebile waseParis njengendawo yezentuthuko ezibalulekile ezithombeni (isib. I-Daguerrotype) nanjengekhaya labadwebi abaningi kwezohwebo (isib., Robert Doisneau, André Kertész, U-Eugene Atget noHenri Cartier
AmaCabarets yimibukiso yendabuko eParis. Banikezela ngezokuzijabulisa, imvamisa kubabukeli abadala, nabahlabeleli nabadansi noma abajabulisa abasemuva. Abadume kakhulu baseMoulin Rouge, eLido, eCrazy Horse naseParadis Latin. Zigcwalisa ngokushesha ukuze ufune ukubhuka ngaphambili. Amathikithi avame ukubiza kusuka ku- € 80 kuye ku- € 200, kuya ngokuthi ngabe udla isidlo sakusihlwa ngaphambi kombukiso.
I-Paris inezimakethe ezintathu zezindiza ezinkulu, ezisemaphethelweni edolobha eliphakathi nendawo. Okudume kakhulu kulokhu iMarké aux Puces de St-Ouen (Porte de Clignancourt) Clignancourt Flea Market indawo yokudla yabathandi bezindawo zasendulo, izimpahla zesandla nemfashini ye-retro. Izinsuku ezinhle kakhulu ozohamba kuzo kungumgqibelo nangeSonto. Qaphela ukuthi kunezikhathi ezithile zeviki lapho kubaqoqi bama-antique kuphela abavunyelwe ezitolo, futhi kunezikhathi zosuku lapho abanini bezitolo bethatha iPiisian Siesta yabo futhi bejabulela i-cappuccino yokuzilibazisa ihora noma ngalapho. Izikhathi ezinhle kakhulu zokuvakashela izimakethe zezimbaza ziba entwasahlobo nasehlobo, lapho le ndawo inhle kakhulu. Esiteshini sika-metro naseduze kwakho, ungathola le ndawo indle kodwa isaphephile.
Imakethe ekhangayo kakhulu kuma-marche aux ipuces de Saint-Ouen yi "Marche Dauphine" ku-138 rue des Rosiers, eSaint-Ouen. Le makethe imbozwe ukuze ukwazi ukuya lapho ngaso sonke isimo sezulu futhi uzothola Ukukhetha okuningi kwezimpahla, abathengisi abaningi be-200 ngaphansi kophahla olufanayo. Isitolo esikhulu semithwalo yevintage kukhona lapho kuthengiswa khona imidwebo emihle yama-vintage kaLouis Vuitton kanye ne-Goyard kanye nefenisha yezindiza, ama-wardrobes we-1930 olwandle olungenayo kanye nama-chandeliers amahle. Kule makethe kukhona abasebenza ubucwebe obukhethekile, abathengisi bemikhuba yaseFrance bakudala, abathengisi bezemidwebo nabathengisi bezindwangu. Yimakethe eguquguqukayo kunazo zonke ngaphakathi kwemakethe yezimbaza.
I-Paris ingesinye sezikhungo eziphambili zaseYurophu.
Ukuhweba ngezindawo zokudlela kuqala lapha eminyakeni engaphezulu kwe-220 edlule futhi kuyaqhubeka ukuchuma. Kodwa-ke, kungamangaza ukuthi iParis ayibhekwanga njengedolobha eliphakeme laseFrance; kunalokho abanye abantu bakhetha ukupheka kwesiFulentshi okutholakala ezindaweni zokudlela ezincane zasemakhaya, ngaphandle kwedolobha, eduze kwamapulazi futhi kugxile kakhulu ekuvuseleleni okusha nasekukhakheni kwesifunda. Ngisho naphakathi kwamadolobha aseFrance, iParis kudala yabhekwa ngabantu abathile njengeyesibili kuyo Lyon yokudlela okuhle.
Namuhla ungathola amakhulukazi izindawo zokudlela ezinhle ezinomqondo ocatshangelwe (noma onemfashini nje kuphela) ngamabhokisi ahlelwe kahle futhi ahlelwe kahle namamenyu
enikeza i-mélange yokudala yezindawo zokudla zaseFrance nezangaphandle.
Kuphephile ukusho ukuthi iParis iphinda ibambe futhi noma ihlele ngaphambi kwezimbangi zayo ze-Anglophone.
Vele kukhona futhi neminikelo yendabuko futhi ngokwesabelomali uyazi ukuthi kunamakhulu ama-bistros wendabuko, ngamathala awo wepaki anikeza ukukhethwa kokudla okulula (okuvame inyama kugxile) kumanani entengo.
Izindawo zokudlela ezi-Trendy zivame ukudinga amasonto wokubhuka, uma kungenjalo izinyanga ngaphambi kwesikhathi. Uma ungahlelelanga ngaphambili ngokwanele, zama ukuthola ukubhukelwa kwasemini okuvame ukuthi kube lula futhi kungabizi kakhulu.
Uma enye yezinhloso zohambo lwakho oluya eParis ukungenela ekudleni kwalo okuhle, noma kunjalo, indlela ebiza kakhulu yokwenza lokhu ukwenza isidlo esikhulu sasemini sasemini sakho. Cishe zonke izindawo zokudlela zinikeza isivumelwano esihle se-prix-fixe. Ngokuphelelisa lokhu ngebhulakufesi lesinkwa sokubhaka kanye nesidlo sakusihlwa esilula, uzokwazi ukuzwa ukudla okuhle kakhulu kweParis futhi usabambelele kwisabelomali.
Xwayiswa ngokuthi izindawo zokudlela eziningi njengazo zonke ezinye France vala phakathi no-Agasti ngamaholide. Qiniseka ukuthi ubheka iwebhusayithi yokudlela oyithandayo noma ubanikeze ucingo.
Kubathandi bokudla kwasolwandle, iParis yindawo enhle yokuzama ama-moules frites (ama-mussels athosiwe kanye nama-fries aseFrance) (okungcono ekwindla nobusika), ama-oysters, iminenke yolwandle nezinye izinto zokudlela zasolwandle.
Ukudla kwenyama kufaka i-venison (inyamazane), ama-boar, kanye neminye imidlalo (ikakhulukazi ngenkathi yokuzingela nobusika), kanye nezintandokazi zaseFrance ezinjengewundlu, i-veal, inyama yenkomo nengulube.
Ama-chartres - Ikhatholika yangekhulu le-12th le-Notre Dame eChartres ngenye yezinto ezigqamile zokwakhiwa kweGothic. (Ukuhamba ngesitimela i-60min kusuka eGare Montparnasse)
I-Versailles - Emaphethelweni we-SW eParis, indawo yesigodlo esihle kakhulu seLanga King Louis XIV. (Ukuhamba ngesitimela kwe-20-40min ngu-RER, vele uqiniseke ukuthi uthola indawo efanelekile yokumboza ithikithi 1-4!)
I-Saint Denis - Ngasemaphethelweni asenyakatho nedolobha, indawo yeStade de Franceand St Denis Abbey, indawo yokungcwaba ubukhosi baseFrance.
Chantilly- Isigodlo namakhulu egadi le-17th elimangalisayo (nendawo yokuzalwa ukhilimu ophehliwe). (Ukuhamba ngesitimela i-25min kusuka eGare du Nord)
UGiverny Indlu ekhuthazayo nezingadi zomlimi we-Impressionist uClaude Monet kumane nje kuwukuhamba kosuku. Izingadi nezimbali zayo kuyingxenye ethakazelisa kakhulu yokuvakasha, ngakho-ke gwema izinsuku zemvula.
I-Disneyland Resort Paris - Esigodini esingaphansi kweMarne-la-Vallée, empumalanga yeParis, ukusuka lapho kungafinyelelwa khona ngemoto, isitimela (i-RER A), noma ngebhasi (isitimela mhlawumbe ukubheja kwakho okuhle kakhulu).
Mont Saint-Michel - Ukuhlangana kwesiqhingi eNormandy, eFrance. Isikhundla sayo esiyingqayizivele sokuba yisiqhingi kuphela samamitha we-600 ukusuka emhlabeni yenza kube lula ukutholakala emafutheni aphansi kuya kubahambi abaningi ukuya endaweni ekulahlwa kuyo.
I-Fontainebleau - Idolobha elihle lomlando i-55.5km (35 mi) eningizimu yeParis. Idume ngeHlathi layo elikhulu nelimnandi laseFontainebleau, uhambo oluthandekayo lwangempelasonto lwamaParis, kanye neChâteau de Fontainebleau yomlando. (Ukuhamba ngesitimela i-35min kusuka eGare de Lyon)
UMaisons-Laffitte - Waziwa kakhulu ngokuthi yi- “Cité du cheval”, njengoba kuyikhaya lezinhlobonhlobo zezitolo (izitolo). Ukuhamba ngehora le-1 lapho kuzokusiza ukuthi ubone amahhashi amaningi (abagibeli bamahhashi) nenqaba eyasungulwa nguLouis VIX. Ngama-25 amaminithi ane-RER A avela esiteshini sesitimela esiphakathi “Chatelet les Halles”). Uma uhlela kahle, ungaya nakweminye imijaho yamahhashi eHyppodrome.